Warshadda iyo soo -saareyaasha Taleefoonka Shiinaha ee Taleefoonnada & Kaadhadhka haysta | SJJ
Haystaha kaarka taleefanka oo leh istaag waa taleefoonka gacanta oo ku habboon inuu kaydiyo kaararkaaga deynta, kaararka magaca, qoraalada, tigidhada iyo lacag caddaan ah. Isticmaalka cajalad 3M ah, culeys fudud iyo si sahlan loo qaadan karo kaararka oo ay la socdaan taleefannadaada gacanta.
Haystaha kaarka taleefanka oo leh istaag waa taleefoonka gacanta oo ku habboon inuu kaydiyo kaararkaaga deynta, kaararka magaca, qoraalada, tigidhada iyo lacag caddaan ah. Adigoo adeegsanaya cajalad 3M ah, culeys khafiif ah oo si sahlan loo qaadan karo kaararka oo ay la socdaan taleefannada gacanta.
Pretty Shiny wuxuu bixiyaa qaabab kala duwan oo taleefannada gacanta ah laga bilaabo nooca nuugista illaa nooca dabacsanaanta, iwm. Qeybaha haysta mobilada iyo kuwa haysta taleefanka gacanta ayaa dib loo isticmaali karaa, taas oo hubaal ah shey xayaysiis oo wanaagsan oo loogu talagalay taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada magacyada waaweyn.
Walxaha silikoon jilicsan, bay'ada-saaxiibtinimo leh, aan dhib lahayn, si fudud loo qabsado oo loo nadiifiyo
Naqshad la taaban karo, waarta, quruxsan oo moodada ah
Silikoon leh xaashi bir ah oo laastiik ah oo ku dheggan iyo cajalad dhejis ah oo 3M ah oo ku taal dhabarka
Rakibaadda fudud, ku habboon in la isticmaalo, dib-u-dhegta, laga saari karo iyada oo aan la hadhin dheg dheg
Hore: Kiisaska Taleefanka
Xiga: Taleefanka Anti-Slip Pad Mat